Amazon waxay qorsheyneysaa inay soo saarto Echo cusub oo kula tartamaya HomePod tayada codka | Wararka IPhone
The Amazon Echo noocyadeeda kala duwan ayaa si tartiib tartiib ah ugu fidaya guryaha adduunka oo dhan, laakiin in kasta oo iibkeedu wanaagsan yahay, haddana shirkadda ayaa aragta sida qaar ku hadla ay u jecel yihiin HomePod, Sonos ku hadla ama Google Home Max, iibka hoose waxay cunayaan xoogaa dhul ah.
Marka ay buuxiso suuqa dadka ku hadla caqliga, hadda waxay dooneysaa inay soo bandhigto mid, marka lagu daro ku darista Alexa iyo dhammaan wanaaggeeda, u tartami kara dhanka tayada codka, iyada oo ujeedadu tahay in dadka isticmaala ee raadinaya codka wanaagsan ay sidoo kale leeyihiin Amazon Echo liistadooda suurtogalka ah.
HomePod wuxuu dejiyay baarka aad u sarreeya markay tahay tayada codka. Nidaamkeeda deegaanka ee xiran wuxuu xaddidayaa suuqa loo jiheeyay, asal ahaan isticmaalayaasha Apple ee adeegsada adeegyadooda, tanina waxay ka dhigan tahay in iibkeedu uusan noqon karin kuwa ku hadla kuwa caqliga badan sida Amazon's Echo, oo aad u furfuran kuna wajahan saldhig weyn oo adeegsadeyaal ah. Sidoo kale ma iloobi karno qiimaheeda, kana sareeya tartanka. Laakiin waa hadafka kuwa, iyagoo ah isticmaaleyaasha Apple, doonaya wax meesha tayada codku ku badan tahay, ka mid ahaanshaha kuwa ugu xiisaha badan marka laga hadlayo dhinacan, xitaa qiimaha.
Sonos, oo leh Sonos One ama Sonos Beam, waxay na siisaa kuwa ku hadla leh Alexa isku dhafan iyo tayo cod leh oo aad uga sarreysa Amazon Echo. Xitaa Google waxay leedahay Google Home Max, ku hadla caqli badan oo leh tayo cod sarreysa. Amazon waxay rabtaa inay ka laabato xaaladan iyo Taasi waa sababta ay u qorsheyneyso inay soo saarto afhayeen leh tayo cod sare leh sanadka 2020, oo u dhiganta HomePod., dabcan leh Alexa. Ma garanayno qiimo iyo helitaan, laakiin dhawr sano ka dib suuqan, waayo-aragnimada suuqani waxay hubaal kaa caawin doontaa inaad ku guuleysato wax soo saar dheellitiran oo tayo iyo qiimo leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Amazon waxay qorsheyneysaa inay soo saarto Echo cusub oo kula tartamaya HomePod tayada codka